Naya Drishti | वडाध्यक्ष्य तेस्रो बिबाह प्रकरण, मुद्धा मिलापत्र गराएको घटनामा प्रहरी संलग्न छ कि छैन ? - Naya Drishti वडाध्यक्ष्य तेस्रो बिबाह प्रकरण, मुद्धा मिलापत्र गराएको घटनामा प्रहरी संलग्न छ कि छैन ? - Naya Drishti
वडाध्यक्ष्य तेस्रो बिबाह प्रकरण, मुद्धा मिलापत्र गराएको घटनामा प्रहरी संलग्न छ कि छैन ?
मंसिर १२ सल्यान । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका प्रमुख डिएसपी गोविन्द थापाले बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका वडा नं ९ का वडाध्यक्ष ईन्द्रबहादुर कुमाईको तेस्रो बहुबिबाहको मुद्दा जारि ( पैसा) दिएर मिलापत्र गराएको घटनामा प्रहरी संगठनको संलग्नता नभएको बताएका छन ।
शुक्रबार, विभिन्न अनलाइन मिडियामा वडाध्यक्ष्य कुमाईको बहुबिबाहको मुद्दा कुमाइले बिबाह गरेर ल्याएकी स्थानीय गौरी बोहोराका पूर्व पति नोखबहादुर बोहोरालाई प्रहरीकै रोहबरमा जारि बाफत रू. ७ लाख, ७५ हजार रुपैयाँ दिएर मेलमिलाप गराएको समाचार प्रकाशन भएपछि नयाँ दृष्टिलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै उनले यस्तो बताएका हुन ।
” फौज’दारी अप’राधका घटना मिलापत्र गराउन जिप्रका सल्यान अन्तरगतका कुनै पनि प्रहरी जवान र अधिकृतहरू उत्सुक छैनन र हुदैनन् पनि ।” डिएसपी थापाले भने -” केश मिलापत्र गराएको घटनामा प्रहरीको संलग्नता भएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता छैन ।”
बिहीवार सहकारी संबन्धी डाटा संकलन गर्न बाबियाचौर चौकी बाट प्रहरी टोली वडा कार्यालय गएको बताउदै थापाले सोही बेलाको फोटोलाई मिडियाहरूले दुरुपयोग गरेको बताए ।
“एउटा प्रयोजनको लागि गएको बेलाको फोटोलाई अर्को प्रयोजनको लागि गएको भनेर मिडियाले आरोप लगाएर हुन्छ ?” उनले भने – प्रहरीको संलग्नता भएको कुनै कागज वा प्रहरीले हस्ताक्षर गरेको कुनै डकुमेन्ट भए मिडियाले सार्वजनिक गरोस , अनि पो हुन्छ ।”
प्रहरी संगठनलाई मुछेर सार्वजनिक भएका समाचारको जिप्रका सल्यानले खण्डन गर्ने तैयारी गरिरहेको पनि थापाले बताए ।
त्यस्तै वडाध्यक्ष्यका विरुद्ध हालसम्म कसैले पनि बहुबिबाहको उजुरी नगरेको डिएसपी थापाको भनाइ छ । ” यो अवधीसम्म कसैले पनि लिखित उजुरी दिनु भएको छैन ।” उनले भने – “हामी उहाँको घरमै गएर जेठी श्रीमतीलाई बहुबिबाहको उजुरी गर्नुस भएका थियौं । आफ्नो श्रीमानले तेस्रो बिबाह गरे नगरेको एकिन गरेर म आफै उजुरी दिन आउला भन्नू भएको थियो । तर अहिलेसम्म कुनै उजुरी आएको छैन ।”
उहाँ न आएपनी उहाँको तर्फबाट अरुले पनि उजुरी दिनसक्ने उनको भनाइ छ । त्यसबाहेक मेयर,उपमेयर, वडा सदस्यहरूले पनि उजुरी दिन सक्ने छन ।
बहुबिबाहको केश भएकाले उजुरी बिना अनुसन्धान गर्न नसकिने उनले बताए । उनले भने – ” उजुरी बिना अनुसन्धान गर्दा भोलि उनिहरूले बिहे गरेका होइनौं भने, भने के हुन्छ ? त्यसैले उजुरी आउनैपर्छ ।”
यद्यपि घटनामा प्रहरीको संलग्नता भए/नभए पनी वडाध्यक्ष्य कुमाइले गौरीका पूर्व पति नोखबहादुर बोहिरालाई (जारी) तिरेको बुझिएको छ । कुमाईले बोहोरालाइ जारि बापत ३ लाख ८० हजार र बोहोराको रिन तिर्नेगरी ३ लाख ९५ हजार रुपैयाँ तिरेका हुन ।
कुमाईले बोहोराकी श्रीमती गौरीलाई मंसिर १ गते भगाएका थिए । गौरीका ५ छोराछोरी छन भने, कुमाईका पहिलाकै २ श्रीमती बाट चार छोराछोरी छन । गौरी र कुमाइले क्रमशः ४६ र ५२ बर्षका उमेरमा बिहे गरेका हुन । गाउँकि जान्नेमान्ने ठानिने गौरीलाई वडाध्यक्ष्य कुमाइले उपभोक्त समितिमा नछुटाई राख्ने गरेका थिए ।
उनिहरू बिचको अवैध सम्बन्ध स्थानिहरूले पनि गाइगुइ सुन्ने गरेको थिए । कुमाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनगाड कुपिण्डे वडा नं ९ बाट तत्कालीन माओवादी बाट निर्वाचित भएका थिए ।
याे बिहे सहित वडाध्यक्ष कुमाइकाे तेस्रो विवाह हो । यसअघि दुईवटी श्रीमती बिहे गरेर घरमा राखेका वडाध्यक्षले गाैरीलाइ पनि श्रीमती थपेर तीनवटी श्रीमती बनाएका हुन् ।
गाैरीका श्रीमान नाेखिराम बाेहराले श्रीमती बारे आफुले पहिला कुनै शंका नगरेको तर एक्कासी परपुरुषसँग बिहे गरेकाे सुन्दा नरमाइलाे लागेको बताएका थिए । घरकाे सबै जग्गा जमिन र पैसा गाैरीकाे नाममा भएकाेले उक्त जग्गा र पैसा फिर्ताकाे लागि आफुले न्याय पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘वडाध्यक्ष जस्ताे जिम्मेवार पदमा बसेकाे मान्छेले यसरी अर्काकाे श्रीमती उठाउन नहुने थियाे, ‘उनि भन्छन्, ‘अब वडाध्यक्षलाइ त जनताले पनि कुन कुरामा विश्वास गर्नु र ?’ पहिले श्रीमती स्वयमसेविका भएकाे र वडाका विभिन्न बैठकमा जान्छु भन्दै घरबाट जाने गरेकाे उनि बताउँछन् ।
बैठकमा जाने गरेकाे आफुलाइ बताएपनि त्यहिबाट वडाध्यक्षसँग नजिक हुँदै गएकाे अहिले आएर आफुलाइ थाहा भएकाे उनकाे भनाइ छ ।
#मिलापत्र #बहुबिबाह #वडाध्यक्ष